Amel Bent dia nandefa sary mihetsika mahamenatra sy mahamenatra - teles relay
Ilay mpihira Amel Bent dia mahafantatra ny fomba hitazonana ireo mpanjifany ho faly. Vao avy namoaka sary mihetsiketsika izy izay mipoaka ny isan'ny olona amin'ny alàlan'ny fanambarany ny vavony ambany ambany ao anaty bra somary ambany be ao amin'ny Instagram. Mahatonga fihetseham-po fotsiny izany!
Amin'ity faran'ny herinandro ity, ny mpandika ny « Ny filozofia Tsy hita ny tambazotra sosialy amin'ny alàlan'ny fandefasana ny sariny amin'ny akanjo manokana.
Taorian'ny vanim-potoana mangina be nifamatotra tamin'ny fanakorontanana, Amel Bent dia nampitombo ny famoahana boky tao amin'ny Instagram mba hizarana ny hakiviana sy ny endriny. Tsy maintsy milaza fa ny mpanazatra ny The Voice ankehitriny dia mpanohana hatrany ny fironana lamaody amin'ny lohataona-fahavaratra 2020.
Taorian'ny nandraisany ny palitao valizy dia tsy nisy na inona na inona ambanin'izy ireo mba handraisana anjara amin'ny famoahana ny TF1 Ny hiran'ny taona, rehefa avy nandoka ny finale of The Voice tamin'ny fisehoana blouse fito-polo mangarahara ihany izy, miresaka momba azy indray amin'ny karazany hafa.
Amel Bent mahia ary somary lava volo noho ny hatramin'izay
Voatifitra amin'ny mombamomba azy ary namboarina ho an'ny foibeny, i Amel Bent dia manambara silhouette miloko tsara sy mihontsina ary voaroy ao ambanin'ny tady vita amin'ny lamba fotsy fotsy misy kofehy fohy. Miampy ny heverintsika ho be pataloha beige sy akanjo firavaka volamena tsara dia tsara, tsara tarehy sy tsy azo tanterahina noho ny taloha ny mpihira.
Vaky haingana ireo mpankafy azy, nanondraka azy tamin'ny fanehoan-kevitra mahafinaritra sy tiana an'arivony: "Mamacita ma que bella", "Baomba", "Tsy misy teny manoloana ny hatsaran-tarehy lehibe loatra", "Inona ny hatsaran-tarehy sy ny tsipika".
Raha kely indrindra dia manandrana maka aina amin'ny lafiny mamirapiratra i Amel na dia mandia fotoan-tsarotra mahatsiravina aza izy ankehitriny noho ny vadiny.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/amel-bent-plus-mince-et-sexy-sur-la-toile-elle-poste-un-cliche-affolant/
Justin Bieber tao am-pon'ny kiana